बाढीपहिरो पिडितको उद्धार तथा राहत वितरणका लागि वाईसियलले खडा गर्यो `विपद राहत कोष’ ! - Kantipath.com
बाढीपहिरो पिडितको उद्धार तथा राहत वितरणका लागि वाईसियलले खडा गर्यो `विपद राहत कोष’ !
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट योङ्ग कम्युनिष्ट लीग वाईसियल नेपालले `विपद राहत कोष’ खडा गरेको छ । कोरोना संक्रमण र प्राकृतिक प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै वाईसियल नेपाल केन्द्रीय समितिले कोष खडा गरेको संगठनका अध्यक्ष तथा पार्टीका केन्द्रिय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा ‘दिपशिखा’ ले बताए। लगातारको वर्षा र बाढीपहिरोले जनजीवन अस्तब्यस्त बनाएपछि वाईसियलले देशैभर राहत वितरण, उद्धारमा तिब्रता दिएको छ ।
उक्त कोष मार्फत बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा काम सुरु भैसकेको सापकोटाले बताए । देश तथा विदेशमा रहनुहुने शुभेच्छुकहरुलाई संगठनको कोटेश्वरमा रहेको प्रभु बैंकको खाता नं ०२०००१००४३१७९००००००३ मा सहयोगका लागि वाईसियल नेपालले अपिल गरेको छ ।
सहयोगीको सहयोग विवरण र राहत तथा उद्दारको लागत विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिने संगठनले जनाएको छ । वाईसियलले आफ्नो आन्तरिक संगठनबाट ३ लाख रकम कोषमा जम्मा गरिसकेको छ । बाढीपहिरो सुरु हुने बित्तिकै संगठनका अध्यक्ष सापकोटा र महासचिव सुबोध सेर्पालीले देशभरका कार्यकर्तालाई उद्दार तथा राहत वितरणमा जुट्न निर्देशन दिएका थिए ।
Previous Previous post: किन भारत पुगेर सन्यासी बने पुर्वप्रधानन्यायाधिश दामोदर शर्मा श्रीमान ?
Next Next post: उद्धार र राहतका काम प्रभावकारी बनाउन विपक्षी गठबन्धनको माग